Owona Mthombo uQinisekayo wokuQinisa amaQhinga akho obuShishino eBlogging | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 13, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukulungiselela ukuthetha no Iingqondo ezibukhali Iqela malunga nokuBloga ngokuBumbeneyo, ndiye ndatsala izibonelelo ezimbalwa kwiindawo ezininzi. Ndingadana ukuba ndingababuleli esidlangalaleni. Kananjalo, ndibonelela ngoncedo kubantu ngezixhobo kunye nokunxibelelana nokubuyela kwezi webhusayithi zabantu.
Ukukuxelela inyani, kwixa elidlulileyo bendichasene nokubhloga kweqonga njengecebo. Ngapha koko, ndibhale eli xesha gquma kuba kuhlala kuyenzeka xa uzama ukucwangcisa okanye ukulinganisa kwibhlog. Ibuyela kuwe. Ndibonile imizekelo emininzi kakhulu yeebhlogi ezilungileyo zeshishini zokuba ndingachasani nayo kwakhona. Iinkampani ngokwenene ziya kuba zenza impazamo ukuba azikhange zisebenzise le teknoloji kwisicwangciso sayo sonxibelelwano.
Kutheni ubukhona beBhlogi eBumbeneyo?
Kutshanje ndiqala ukuqaphela uninzi lweenkampani ezixabisayo ukuba zeziphi iibhlog ezibonelela iinkampani zazo kunye nabathengi, ngakumbi:
Inika inkampani kunye nabasebenzi babo ukubonakaliswa njengeenkokheli zokucinga kwishishini labo.
Iphucula ukubonakala kwenkampani. Ngapha koko, ngokwezibalo ezithile, iipesenti ezingama-87 zolunye utyelelo kwiiwebhusayithi zenkampani zenza ukuba zenze iibhloko.
Inika abasebenzi bakho, abathengi, kunye nethemba ngobuso bomntu kwinkampani yakho.
Isebenzisa ibhlogosphere kunye netekhnoloji yeinjini yokukhangela ukuphucula inkampani yakho ukufumaneka kwi-Intanethi.
Ukwenza ngempumelelo, kukho ezinye iingcebiso ezilungileyo kumnatha. Nantsi eminye imizekelo:
Cinga ngokudibanisa ikomiti yebhlog eyongamela iibhlog, umxholo, ukutyhala inxaxheba, kunye nokuvuma iibhlog zenkampani.
Khuthaza iiblogi zakho ukuba zifunde iiblogi kwaye zifumane iingcebiso zazo kwiiblogi. Izixhobo zokuthengisa kunye noKukhutshwa koNondaba zijongwa njengezingezomntu kwaye zijongwa njengeeblogi - zihlala ngenxa yokujikeleza, ukunganyaniseki kunye nomxholo owamkelwe kwangaphambili.
Chaza umxholo ojolise kwibhlog yakho, injongo, kunye nombono wakho wokugqibela. Nxibelelana noku kwibhlog yakho ngokufanelekileyo kwaye ubone indlela yokulinganisa impumelelo yakho.
Yenza ubuntu kwizithuba zakho kwaye uxele ibali. Ukubalisa amabali yeyona ndlela isebenzayo yokufundisa abantu kumyalezo wakho weposi. Ababali ababalaseleyo bahlala besoyisa.
Thatha inxaxheba kwaye ujoyine abafundi bakho. Bavumele ukuba nefuthe kunye nengxelo kwizihloko zakho kwaye ubaphathe ngentlonipho enkulu. Thatha inxaxheba kwezinye iiblogi kwaye uqhagamshele kubo. Yindawo 'yempembelelo' ekufuneka unxibelelane nayo.
Yakha ukuthembana, igunya kunye negama lakho. Phendula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Njengoko usakha ukuthembana, iya kuba njalo nenkampani yakho.
Yakha umfutho. Iiblogi azikho malunga neposi, zimalunga nothotho lwezithuba. Ezona blogs zomeleleyo zakha igama kunye nekhredithi ngokutyhala umxholo obalulekileyo rhoqo.
Nanku umbono wam we-axis ye-3 iqhinga elikhulu lokubloga liquka, Unxantathu weBlogging:
Omnye umkhondo obuyela emva uphawule ngeposi ukuba uyilo lwalungekho kwisicwangciso sisonke. Xa sithetha ngayo Iindlela eziCwangcisiweyo zeBloggingNdiyakholelwa ukuba uyilo lubaluleke kakhulu- kodwa lumiselwe kwangaphambili yiNtengiso. Ndiyathemba ukuba iqumrhu sele linalo uyilo olukhulu lwewebhu kunye nobukho ngaphambi kokuntywila kwibhlog. Ukuba akunjalo, bangayongeza kuluhlu!
Zeziphi iRisk ezikhoyo?
Kwintlanganiso yeklabhu yencwadi engeyiyo yakutshanje, sibuze omnye wababekho, igqwetha, ukuba zeziphi izinto ezisemthethweni malunga nokubhloga kwabasebenzi. Uthe ubuncwane obufanayo naloo mqeshwa xa ethetha naphina. Ngapha koko, uninzi lweencwadi zesikhokelo zabasebenzi zigubungela ulindelo lwezenzo zabasebenzi. Ukuba awunayo incwadi yesikhokelo egubungela indlela yokuziphatha elindelweyo ngabasebenzi bakho, mhlawumbi kuya kufuneka! (Nokuba kubhloga).
Nantsi ireferensi emnandi kwi- YENZA kwaye UNGAYENZI yokubloga ngokwembono yomthetho.
Ezinye izinto ezongezelelweyo zokuxoxa:
Uza kujongana njani nokugxekwa, ukungqubana okungalunganga kunye nokubeka izimvo? Kuyacetyiswa ukuba usete ulindelo ngaphambili malunga nokuba izimvo ziya kumodareyithwa kwaye zamkelwe njani kwibhlog yakho. Ndingakhuthaza umgaqo-nkqubo wezimvo kuyo nayiphi na ibhlog yeshishini.
Uza kuqinisekisa njani ngophawu lolawulo? Awudingi iibhlog zakho zihlukumeza ngesilogeni, iilogo, okanye ilizwi lophawu lwakho. Yenze izandla.
Uya kujongana njani neebhlog zakho ezingasebenzi? Ngaba iibhlog zakho zamkele umgaqo-nkqubo phambi kwesandla apho ukuthatha inxaxheba kunganyanzelekanga kuphela, kodwa ukushiyeka ngasemva kuya kubachaphazela ukubhencwa. Banike isihlangu! Ukugcina imveliso engaguquguqukiyo yezihloko ngumba ophambili kuso nasiphi na isicwangciso sokubloga.
Uza kujongana njani nokuvezwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda engundoqo kwishishini lenkampani?
Iincwadi zokuFunda ngesihloko:
Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies - Ibhalwe ndim!
Incwadi yeNgcaciso yeBlogging: Ngokuqinisekileyo yonke into ekufuneka uyazi ukuba ilungile.
Bomthonyama: Isikhokelo seshishini ngoku: Ngokwemvelo, isiQinisekiso, kunye nokuTshintsha rhoqo.
Incoko ezihamba ze: IiBlogs ziyitshintsha njani indlela amashishini athetha ngayo nabaThengi.
Iingcebiso ngeBlogging Advice and Resources
Lonke ulwazi endiludibanise kule posi luphefumlelwe ngenye yeekhonkco ezininzi ezilapha ngasentla okanye kolu luhlu lungezantsi. Kwakukho izithuba ezininzi kakhulu ezichazwe kwiinkcukacha apha. Ndiqokelele ulwazi oluninzi endinako kwaye ndazama ukukubeka kwisithuba esinye esinokubonelela ngesishwankathelo esikhulu seembono zeengcali ezininzi kwizicwangciso zokubloga kwamashishini. Ndiyathemba ukuba abanini beeblogi bayayixabisa-bafanele lonke uzuko kule post!
Ndingakhuthaza nabani na otyeleleyo ukuba achithe ixesha kwenye yezi blog. Zizinto ezintle kakhulu!
Uyiqala njani iBhlog
Ukufundwa kweBlogging Impumelelo yiYunivesithi yaseMpuma
Isikwere ngaphakathi ngaphakathi
I-Blog yeNtengiso yeDiva
Imizekelo yokuBhloga ngokuBumbeneyo
Esi sithuba asizukugqitywa ngaphandle kokubonelela UkuBhloga ngokuBumbeneyo amakhonkco. Ezinye zikhona esemthethweni iibhlog zeshishini kodwa ndicinga ukuba kubalulekile ukujonga engafanelekanga Iibhloko zebhloko ngokunjalo. Inika ubungqina bokuba ukuba uthatha isigqibo sokungabhlogi malunga nenkampani yakho okanye uphawu, omnye umntu unokuthi!
IiBlogs zeNethiwekhi kaMicrosoft
Ibhlog kaGoogle esemthethweni
Matt Cutts: Izixhobo, uGoogle kunye ne-SEO
Ibhlog engabonakaliyo ye-DreamHost
Ukusuka Apho Ndihleli khona
Ibhlog yokukhangela ye-Yahoo
UkuSebenza ngokuKhangela kwiBlogging
Amashishini kunye nabathengi baphanda ukuthengwa kwabo okulandelayo kwi-intanethi ngokusetyenziswa komxholo kunye neebhlog zebhizinisi ezibonelela ngalo mxholo. Oko kwathethi, kukho amanyathelo ekufuneka uwathathile ekuphuculeni iqonga lakho (ngesiqhelo iWindowsPress) kunye nomxholo wakho. Xa ukhupha ikhaphethi ebomvu kuGoogle, bakhomba umxholo wakho kwaye bandise ukufikelela kumxholo wakho ngokubonakalayo. UBryant Tutterow ubhale uthotho ekusebenziseni ibhlog yakho-qiniseka ukuba uyayifunda kwaye ubize Highbridge ukuba ufuna uncedo.
Nceda uzive ukhululekile ukuba uphawule kwaye ungeze iiKhonkco zakho zeBlogging ozithandayo!
tags: kublogaIzikhokelo zeblogiIzibonelelo zeblogikubloga kwequmrhuimizekelo yeeblogi ezihlanganisiweyoukubhloga ngokudibeneyo kweedummitesizikhokelo zokubloga ezihlanganisiweyoubuchule bokubloga kwequmrhu
Akukho mntu uyikhathaleleyo malunga neBhlog yakho!
Mar 13, 2007 ngo 9:46 PM
enkosi ngokubhekisa kwisifundo sempumelelo yokubhloga. Njengomnye wababhali ababini abakhokelayo bophononongo, ibiyinjongo yethu ukunceda uluntu ngeengcebiso malunga nempumelelo yokubhloga.
Mar 13, 2007 ngo 10:15 PM
Sisifundo esimangalisayo. Ndiyikrobile kodwa andinakulinda ukuba ndingene nzulu kuyo. Wenze inkonzo entle ngokunikezela ngale nto! Wenze kakuhle!
Mar 14, 2007 ngo-1: 57 AM
Cinga ngokuhlanganisa ikomiti yeblogi […] evuma iiblogi zenkampani.
Ngoko ngokusisiseko iblogi yenkampani iya kuba yingqokelela yemihla ngemihla / yeveki yentetho yokuthengisa? Njengoko usitsho:
Izibonelelo zeNtengiso kunye noKhupho ngoShishino […] zijongelwe phantsi […] ngenxa […] yomxholo ovunywe kwangaphambili.
Ndicinga ukuba ngaphandle kokuba ulungele ukuvuleka kwaye ungasusi nje ukucima izimvo ezingalunganga, inkampani inokunamathela kwisicwangciso sakho esidala sewebhu. Kanye njengokuba isicwangciso sokuphucula umgangatho wokukhangela siya kutyhilwa ngolo hlobo.
Mar 14, 2007 ngo-2: 06 AM
Ekufundeni okwesibini uluvo lwam lokugqibela lwabonakala lungalunganga. Yayingeyonjongo leyo. Iposti emnandi oyibhalileyo, Douglas.
Ndandibonisa nje ukuba inkampani kufuneka ibone iblogi ngaphezu kwesinye isixhobo sokuthengisa. Ingumjelo othe ngqo kumthengi, kodwa kuphela xa isetyenziswe a) ngokuvulekileyo kunye b) njengesixhobo sokunxibelelana ngeendlela ezimbini.
Mar 14, 2007 ngo-6: 44 AM
Khange ndiyithathe ibenegative, Martin. Ndivumelana nawe... Andiqondi ukuba iKomiti yeBlog kufuneka iphumeze isiqulatho ngasinye – kodwa ndicinga ukuba ikomiti kufuneka ithathe ixesha ukuqinisekisa ukuba iiblogi zihleli kumxholo, inika iingcebiso kunye nengxelo, kwaye igcina amandla.
Ndiyavuma - ukuba ikomiti yeblogi iphonononga, ihlela, kwaye iphonononga umxholo - ibhlog iya kulahlekelwa ukuthembeka kwayo kunye nokufunda ngobusuku. Ndiya kuqiniseka ukuba ndiyicacisa loo nto kwintetho yam.
Ndikwavuma... ukuba uqhubeka uphazamisa ukuthengisa kunye ne-PR spin njengenxalenye yesicwangciso sakho sokubloga, ungagcina iwebhusayithi!
Mar 14, 2007 ngo 8:18 PM
UDoug - isithuba esihle! Ndisebenza ekuphuhliseni ibhlog yeshishini ngoku kwaye ndifumene izixhobo ezininzi zokuzisebenzisa kule post. Umsebenzi omhle - enkosi!
Mar 14, 2007 ngo 8:25 PM
Enkosi kakhulu, Patrick! Ndine Ukukhuphela ngokunjalo, ukuba ungathanda ukuyisebenzisa. Ndiyibeke nje ngokuhlwanje (emva kokuprinta isitaki ku Kinkos ngomso)
Juni 11, 2007 ngo-11: 11 PM
Ndandinomdla wokufumana ikopi eprintiweyo okanye into endinokuyiprintela kweso sifundo. Kunomdla kum ukuba ndizise oku kunye nabathengi.
Ndicinga ukuba omnye wabathengi bam abakhulu unokwakha "i-clog"
Dec 13, 2007 ngo-10:05 PM
Kuya kuba kuhle ukuba eminye imizekelo yebhlog yeshishini ibivela kwiinkampani ezingezizo ezobuchwephesha.
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2007 ngo-2: 54 AM
Yingxelo entle leyo, yiu! Ngenene kufuneka nditsale eminye imizekelo. Ndicinga ukuba kukho itoni kwi-arhente yokuhamba.
Agasti 6, 2015 kwi-10: 57 AM
Ukubhloga kwenkampani njengeqhinga luluvo olukhulu lwerme..
Esikhundleni sokusebenzisa i-social media ukukhuthaza ishishini, kufuneka siqale ukwakha iblogi ebandakanya izinto ezininzi ezifana nokubhala amanqaku afumana ingqalelo kuluntu okanye umthengi onokubakho, ukhetho oluchanekileyo lwezihloko kwaye kubaluleke kakhulu ukubonelela ngomxholo wenqaku elixabisekileyo. abafundi.
Oku kuya kukunceda uhlale ixesha elide kwimarike kwaye ukhuthaze ishishini lakho.
I-Skytech – iBloga evela eMalaysia